Sedax sheey qofkii daaimtaa cudur aan la’ aqaanin baa dila – Biyacade
December 8, 2014 December 20, 2014 biyacade
Sedax sheey qofkii daaimtaa cudur aan la’ aqaanin baa dila
Sedax sheey ninkii daaim taa cudur aan la’aqaanin baa dila
Khamrada: Ninka kahmara cabista badan waxaa dila cudur aan la’aqaanin.
Cunnada: Ninka daaimta raashinka ee ka dharga had iyo jeer cudur aan la’aanin baa dila.
Galmada Ninka daaim ta galmada haweenka cudur aan la’aqaanin baa dila.
Waxaa la yiri: “Qofka caaqilka ahi waa kan saddex waxyaabood joogteysta, ha yeeshee
Waxa kale oo la yiri: “Geedka ninku waa sida candhada xoolaha, haddii la liso wuu
dararaa oo godladaa, haddii la daayana wuu guraa. Nin tilmaamaya siduu galmada u
jecel yahayna wuxuu yiri: “Saddex baan la’iga maareyn karin: Hilib la cuno, hilib la
Nin baa asagoo wiilkiisa la dardaarmaya ku yiri: “Wiilkeeyow, dumar la xaajoodkood
haku dheeraan yaanad ka xiisin ayana kaa xiisa dhicine, inaad ka joogsato adoo u
jeellan baana laguu qaatay intay adoo jilcan ku jiidjiidi lahaayeen”.
Previous maxaa kaaga soo baxay